तपाई काम गर्ने ठाउँमा त कतै यस्ता हाकिम छैनन् ! खराब हाकिम चुराेट भन्दा बढी हानिकारक हुन्छ ! एक अध्ययन
एजेन्सी । तपाईले कुनै पनि जागिर खादै हुनुहुन्छ भने तपाई कति खुसि हुनुहुन्छ । तपाईको कामको जिम्मेवारी भन्दा पनि काम गर्ने ठाउँको हाकिमका कारण धेरै तनावमा त हुनुहुन्न ।
क्वार्टर म्यागेजिनमा प्रकाशित एक अनुसन्धानले अमेरिकाका करिव ७५ प्रतिशत कामदारहरुको डिप्रेसनको मुख्य कारण उनीहरुको हाकिम भएको खुलासा भएको छ। हावर्ड विजनेश स्कुल र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले गरेको २ सय भन्दा बढी अध्ययनले कामका क्रममा लिइने तनावले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पुर्याउने र यो चुरोट भन्दा बढी हानिकारक हुने देखाएको हो। तनावको मुख्य कारण भने खराब प्रवृत्तिको हाकिम रहेको छ।
अनुहारमा नरिवलको तेल लगाउँदा हुन्छ यस्तो चमत्कार !